किन ४५ मिनेटसम्म डाउन भएको थियो ह्वाट्सएप, फेसबुक र इन्स्टाग्राम? कम्पनीले बतायो कारण - Technology Khabar
» किन ४५ मिनेटसम्म डाउन भएको थियो ह्वाट्सएप, फेसबुक र इन्स्टाग्राम? कम्पनीले बतायो कारण
किन ४५ मिनेटसम्म डाउन भएको थियो ह्वाट्सएप, फेसबुक र इन्स्टाग्राम? कम्पनीले बतायो कारण
Technology Khabar ७ चैत्र २०७७, शनिबार
शुक्रबार राति अर्थात मार्च १९ को दिन ह्वाट्सएप, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्याका कारण विश्वभरका सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले धेरै समस्या सामना गर्नु परेको थियो।
इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग एप ह्वाट्सएप, फेसबुक र फोटो साझा गर्ने प्लेटफर्म इन्स्टाग्रामको प्रयोगकर्ताहरूले करीव ४५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्म समस्या सामना गरे। लगभग पौने ११ तिर, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले समस्याको गुनासो गरे। यो समस्या लगभग पौने १२ बजेसम्म भएको थियो।
हाल फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको कंपनी ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम डाउन हुँदा कम्पनीले आधिकारिक बयान जारी गरेको छ।
फेसबुकले यसलाई एक प्राविधिक विषयको रूपमा वर्णन गरेको छ। एक फेसबुक प्रवक्ताले मिडियालाई भने कि मार्च १९ मा, प्राविधिक गल्तीका कारण प्रयोगकर्ताहरूलाई फेसबुकका केही सेवाहरू पहुँच गर्न समस्या भइरहेको थियो। हामीले यो समस्या सबैको लागि समाधान गरेका छौं र हामी यस असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौं। त्यस्तै ह्वाट्सएपले आफ्नो ट्वीटमा धैर्यताको लागि धन्यबाद दिएको थियो जसमा सो समय ४५ मिनेट लामो भएको र पुनः फर्किएको बताएको थियो ।
त्यसैगरि इन्स्टाग्रामले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमा भन्यो, ‘केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको इन्स्टाग्राम खाताहरूमा पहिल्यै समस्याहरूको सामना गरिरहेका थिए, तर अब हामी फर्केका छौं। यो समस्या समाधान गरिएको छ र हामी यस समस्याको लागि क्षमाप्रार्थी छौं।’
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७७, शनिबार
सामसंगको ग्यालेक्सी एस नाइनमा यस्ता फिचरहरु हुने
८ माघ २०७४, सोमबार
पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली बारे ग्राहकहरुको भ्रम, नेपाल टेलिकमले यसरी स्पष्ट पार्यो
नोकियाले ल्यायो ३६ घण्टा ब्याट्री टिक्ने ‘नोकिया लाइट इयरबड’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने- टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउँछौं
बैंकको क्रेडिट कार्ड देखाएर शुन्य ब्याज र किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोन किन्न पाईने, फ्री गिफ्ट साथमा
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सको सद्भावना दूतमा शृंखला खतिवडा नियुक्त
ह्वावे टेक्नोलोजीज स्मार्ट क्लासरूम उद्योगमा प्रवेश गर्दै
ज्याक डोर्सी र एलन मस्क बिटक्वाइनले नवीकरणीय उर्जालाई प्रोत्साहन दिनेमा सहमत
एप्पल र सामसङपछि स्मार्ट ट्याग ल्याउँदै ओपो
मोटोरोलाको नेपालमा पुनरागमन, मोटो इ सेभेन १२ हजार ९ सय रुपैयाँमै पाइने